XOG+WARBIXIN: Maxay ka dhigan tahay in Beelaha Puntland, xiligan shaaciyaan ku dhaqanka Shareecada Islaamka?
August 10, 2019 NEWS 2
BOOSAASO(P-TIMES)- Bilihii ugu dambeeyey beelaha Puntland qaar kamid ah waxay shaaciyeen in ay ku dhaqmayaan shareecada Islaamka oo ay kula dhaqmayaan beelaha deriskooda ah oo ay wax la wadaagaan, taas oo ahayd arrin ilaahay horey ummaddiisa ugu amray, laakiin la rumeysan yahay in ay ujeedooyin ku daaban yihiin waqti xaadirkan.
Beeluhu waxay shirarkooda kaga dhawaaqeen magaalooyinka waa weyn, si qarsoodi ah iyo si guud, waxaana saxaafadda qaarkeed laga baahiyey warar arrimahan ku saabsan.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu dabagal ku sameeyey dhacdooyin sidan oo kale ahaa oo kadhacay gobalka Mudug iyo Karkaar oo shalay ugu dambeysay, waxaana aan ogaanay arrimo waa weyn oo ammaanka khuseeya.
Ula jeedada ay beelahan xiligan u shaaciyeen ku dhaqanka Shareecada Islaamka, oo ka dhigan in aysan horey ugu dhaqmi jirin waxaa ka dhex-muuqda walaac xagga ammaanka iyo amaro meelo kale uga yimid.
Magaalada Gaalkacyo, kooxda Al- Shabaab ayaa heshiisyo lagashay beelaha badankooda, waxay kula heshiiyeen in shareecada ku dhaqankeeda ay ku dawaaqaan, In aysan howlahooda Shabaabnimo faragashan in ay taageero siiyaan ama lacago Canshuuraha hadba sida aad u garan ogtahay.
Beelaha gobalka Mudug badankooda wey fuliyeen damaca Al- Shabaab, waxaana la gaaray xili ay ku dhawaaqaan dhismaha Maxkamadda Shareecada Islaamka oo ay riixayeen Isimadda gobalka, taas oo la baajiyey xiligii uu safarka ku tagay Mudug Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Mr, Deni iyo Waxgaradka Mudug si adag ayay uga wada hadleen arrimahaas, Madaxweynuhu si furan ayuu fagaare uga sheegay in aan gobalka Mudug looga talin doonin Jilib & Jamaame, waana labada meelood ee ay ugu xoogan yihiin Al- Shabaab.
Xogta aan helnay waxay cadeynaysaa in heshiiska Al- Shabaab iyo qaar kamid ah beelaha Mudug uu yahay mid sii socda oo aan waxba laga bedelin, waxaana beelaha qaarkood ay si toos ah ugu dhawaaqeen mar kale qaadashada go`aamada Al- Shabaab.
Puntland, waxay xirtay odayaal ka soo jeeda beelaha gobalka Mudug waxaana dhawaan aan ogaanay in si qarsoodi ah loogu xukumay 20 sanno oo xarig ah, Odayaashaas oo si toos ah saxaafadda uga sheegay warkan, ka dib markii uu Madaxweynaha Puntland ka soo laabtay gobalka Mudug.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo ka hor-hadlayey baarlamaanka Puntland bilo kahor ayaa kusifeeyey in kudhaqanka Shareecada ee beelaha waqtigan ay tahay gacan-haatin loo gacan haatinayo meelo kale, oo ula jeeday kooxaha Argagixisada ah ee Shabaab.
Ka sokow Mudug, Warsidaha Puntlandtimes waxay ogaatay in gobalka Barri ay jiraan culeyso badan oo ay saareen kooxaha Daacish & Al- Shabaab oo ay lacago badan ka qadaan ganacsatada iyo shaqsiyaadka ay ku tuhmayaan heysashada aduunyo, waxayna beelaha qaarkood ku cadaadinayaan in ay qaataan amaradooda.
Xogta aan helnay waxay sheegaysaa in ay beelo badan oo degan gobalkaas ay xariir la yeesheen Al- Shabaab si ay uga nabadgalaan oo aan dadkooda loo dilin, waxayna taasi ku xireen sharuudo ay ka mid yihiin ku dhaqanka Shareecada Islaamka iyo amarro kale, waxaana muuqata in qaarkood mar horeba ay bilaabatay in beeluhu ku dhawaaqaan.
Xogtu waxay cadeynaysaa in ay Shabaab diideen in si hoose beel kasta qorshaheeda fushato, oo ay ku amreen cidda ay wadada xariiriyeen in ay saxaafadda ku baahiyaan warkooda, taas oo ka dhigan in ay tahay mid ay isku muujinayaan.
Xukuumadda Puntland ilaa hadda kama aysan hadlin, Odayaal saxaafadda uga hadlay oo laga soo xiray gobalka Mudug ayaa hadda ku jira xabsiyada magaalada Boosaaso, waxaana sheeda laga eegayaa sida ay hadda Xukuumaddu uga jawaabto ficilada cusub ee ka curtay gobalka Barri.
Tanni, waa caqabad weyn oo dhib ku jiritaanka hanaanka dawladnimada Puntland, iyadoo ay sidaas oo kale liidasho ku tahay hanaanka dawliga ah in ay beeluhu xariiro la sameeyaan kooxaha Argagixisada ah, sida ay talaabo qaado ayaan indhaha lagu hayaa, maadaama nidaamka oo la garab-maraa ay tahy sharci darro iyo in macaamil lala sameeyo Ururo Argagixiso.
Umalayn mahayo in ay run tahay waxaa xiriir dhexmaray beelo reer puntlaan ah iyo shabaab.Hadalkaas dib ha loogu noqdo.Sababtoo ah Shabaab iyo reer puntlaan wanaag iyo nabadi kama dhaxeeyaan.Wayse dhicikartaa in ay shabab la xiriireen niman dano gaara leh.Shabaab waa qeyb ka mida qeybaha USC.USC-na waa la ogyahay waxay ku suubisay dadkii reer puntlaan iyo soomaaliweeynba.Haddiise ay jiraan beelo reer puntlaan ah oo shabaab maciin mooday waa kuwo an warba ka hayn adduun iyo aakhiro midna.Waayo shabaab wax loogu xisho mahayaan.Shabaab Diin Islaan ma wadaan oo waxayba xasuuqaan dadkii haystey diinta Islaamka iyo kuwaan haysanba.
Timir Ali says:
Waa been iyo probogand beeluhu waxay ula jerdaan ku dhaqanka sharercadu waxa weye in h hadii dilal iyo shaqaaqooyin ay dhex maraan beelaha kale ee deriska ah in ay kula baxaan shareecada waxna ku qaybsadaan waana arin fiican mana ahan markii ugu horaysay 2016 beel degan gobolka karkaar Qardho ayaa go aankaas qaadatay. Midna ogaada shareecada ku dhaqan keedu waa mid waajib ku ku ahqofksta oo Muslim ah mana ah wax ay shabaab leeyihiin. Shabaab waa koox dad qalato ah oo aan diin lahayn. Allah quraankiisa sadex jeer ayuu yiri cidii aan isku xakumin waxa aan soo dejiyay oo kitaabka ah waa kaa firiin waa daalimiin waa faasiqiin marka shareecada in lagu dabakho nolosheena waa asaasi.